Articles Published on October 1, 2014 | %}Sagal Radio Services |
Articles Published on October 1, 2014
Bukaan qaba cudurka Ebolaha oo lagu arkay dalka Maraykanka
Sagal Radio Services • News Report • October 1, 2014
Bukaankii ugu horeeyay ee qaba cudurka dilaaga ah ee Ebolaha ayaa lagu arkay magaalada Dallas,Texas dalka Maraykanka. Mas’uuliyiin ka tirsan isbitaalka Texas Health Presbyterian Hospital ayaa sheegay in qof aan la shaacin magaciisa lagu hayo qeybta karantiilka ee isbitaalka.
Wafdi uu Hoggaaminayo Madaxweynaha Somalia oo Gudashada Waajibka Xajka ugu Ambabaxay Dalka Sucuudiga Carabiya
Madaxweynaha Somalia Xasan Shiikh Maxamuud iyo xubno wasiirro ah ayaa galbta u dhoofay dalka Sucuudi Carabiya si ay uga qayb-galaan gudashada waajibaadka xajka ee sannadkan oo ah tiir ka mid ah tiirarka Islaamka oo qof wlaba oo muslim ah laga doonayo inuu hal mar guto inta uu nool yahay.
Dowladda Somalia oo laga Caawinayo Hirgelinta Federaalka iyo Garsoorka Dalka
Dalalka Saudi Arabia iyo Switzerland ayaa sheegay inay dowladda Soomaaliya ka caawinayaan horumarinta nidaamka federaalka dalka iyo garsoorka, kaddib markii xubno dalalkan ka tirsan ay la kulmeen mas’uuliyiinta dowladda Soomaaliya.
Dagaal u dhaxeeya labo maleeshiyo beeleed oo dib uga soo cusboonaaday deegaanka Deefow
Dagaal ayaa saaka ka qarxay deegaanka Deefow ee Gobolka Hiiraan, kaasoo u dhaxeeya labo maleeshiyo beeleed horay ugu dagaalamay deegaankaas, iyadoo uu jiray heshiis la dhex dhigay labadan beelood.
Wariyeyaasha Shabelle ee ku xiran Xabsiga Dhexe oo la sheegay Cunada ka soomeen
Wariyeyaasha Shabelle ee ku xigan xabsiga Dhexe ee Muqdisho ayaa la sheegay in maalintii labaad ay Cunada ka soomeen, iyadoo muddo 45 cisho u xiran dowladda Soomaaliya.
Madaxweynaha Jabuuti oo ku eedeeyay mucaaradka dalkiisa in aanay diyaar u aheyn in xal laga gaaro khilaafka
Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo wareysi gaar ah siiyay laanta afka Soomaaliya ee BBC-da ayaa ku eedeeyay mucaaradka dalkiisa in aanay diyaar u aheyn in xal laga gaaro khilaafka kala dhaxeeya dowladda.
Ciidamada Dowlada Soomaaliya iyo kuwa AMISOM oo u dhaqaaqay Qabsashada Magalaada Muhiimka ah ee Baraawe
Wararka ka imaanaya Gobolka Shabeelaha Hoose ayaa sheegaya in Gobolkaasi uu ka jiro dhaq dhaqaaqyo ciidan oo aad u xoogan , waxaana lasoo warinayaa in Cutubyo katirsan Ciidamada Dowlada iyo kuwa AMISOM ay u dhaqaaqeen Dhinaca Degmada Baraawe.
RW C/weli oo sheegay inay xooga saarayaan dhismaha Maamulada Gobolada
Ra’iisul waasaraha xukuumadda Soomaaliya, C/weli Sheekh Axmed ayaa sheegay in dowladda ay ka go’an tahay inay xoogga saarto hirgelinta maamullada gobollada dalka, isagoo xusay inay arrintan ahmiyad gaar ah siinayaan.